Showroom Sale Cum Sales Coordinator Archives - Glory Assumption Space
Showroom Sale Cum Sales Coordinator
Showroom Sale Cum Sales Coordinator - Female /5Posts / Salary – 150000 Kyats / Bahan Township
မင်္ဂလာပါရှင်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော ဗဟန်းမြို့နယ်တွင်ရှိသော Lighting Distribution ကုမ္ပဏီကြီးတွင် အောက်ပါဝန်ထမ်းများအမြန်လိုအပ်နေပါသည်။ 1.	Showroom Sale Cum Sales Coordinator - Female /5Posts / Salary – 150000 Kyats / Bahan Township •	တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီး ၊ သွက်လက်ချက်ချာရမည်။ Customer နှင့်ဆက်ဆံရာတွင် ကောင်းမွန်ပြေပြစ်စွာ ပြောဆိုနိုင်ရမည်။ •	Interpersonal Skill ကောင်းရမည်။ •	Computer Excel,Word,Internet,E-mail ကောင်းစွာသုံးနိုင်ရမည်။ •	Sales Department ဧ။် ကိစ္စအ၀၀ကိုလည်း လိုအပ်လျှင်လိုအပ်သလို အဆင်ပြေအောင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr4@gmail.com -, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr1@gmail.com ,gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No.- 09 262223783 ,09-262223784 , 09 977397705 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Showroom Sale Cum Sales Coordinator -Female (5)Posts
မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Lighting Co.,တွင် တာဝန် ထမ်းဆောင် ရန်အောက်ပါဝန်ထမ်းများ အမြန်အလိုရှိသည်။ Showroom Sale Cum Sales Coordinator -Female (5)Posts / Salary-200000/ Bahan Township - တက္ကသိုလ် မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီး သွက်လက်ချက်ချာရမည်။ Customer နှင့်ဆက်သွယ်ရာတွင် ကောင်းမွန်ပြေပြစ်စွာ ပြောဆိုနိုင်ရမည်။ Interpersonal Skill ကောင်းရမည်။ - Computer Exel ,Word ,Internet ,E-mail ကောင်းစွာသုံးနိုင်ရမည်။ - Sales Department ၏ ကိစ္စအ၀၀ကိုလည်း လိုအပ်လျှင်လိုအပ်သလို အဆင်ပြေအောင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail-gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.-09-262223785,09-977397705,09-263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ –MyanmarProfessionalTraining Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Showroom Sales Cum Sales Coordinator -Female (5) Posts
************** URGENT REQUIREMENT ****************** မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Co.,တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန်အောက်ပါ ၀န်ထမ်းများအမြန်အလိုရှိသည်။ Urgent Post 1. Showroom Sales Cum Sales Coordinator - Female (5) Posts / Salary 150000 Kyats /BahanTownship Requirements - တက္ကသိုလ်မှဘွဲ့တစ်ခုရရှိပြီး ၊သွက်လက်ချက်ချာရမည်။ - Customer နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ကောင်းမွန်ပြေပြစ်စွာပြောဆိုနိုင်ရမည်။Interpersonal Skill ကောင်းရမည်။ - Computer နှင့်ဆက်ဆံရာတွင်ကောင်းမွန်ပြေပြစ်စွာ ပြောဆိုနိုင်ရမည်။ - Computer Excel, Word , Internet ,E-Mail ကောင်းစွာသုံးနိုင်ရမည်။ - Sales Department ၏ကိစ္စအ၀၀ကိုလည်း လိုအပ်လျှင်လိုအပ်သလို အဆင်ပြေအောင်လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr4@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, Phone No – 09-263256668,09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။ ( လှည်းတန်း မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ )